Mesianisma - Wikipedia
Ny mesianisma dia foto-pampianarana miorina amin'ny fiandrasana sy ny fanomanana vaninandro vaovao izay hitondra fahafahana sy fahasambarana ary fiadanana eto an-tany sady finoana ny fahatongavan'ny olona hitondra izany fanafahana ny olombelona na ny vahoaka voageja izany, ka izany olona izany dia atao hoe Mesia na Masia (izay midika hoe "voahosotra") ao amin' ny fivavahana abrahamika. Tsy ny fivavahana abrahamika ihany no ahitana mesianisma fa fivavahana maro hafa koa. Ny herin' ny mesianisma dia ny fahafahany mandresy lahatra ny mpanaraka azy amin' ny fampanantenana fa ny fahoriana miseho amin' izao fotoana izao dia mialoha ny hiavian'ny zava-tsoa tsara lavitra hoavy.
Miitatra ny hevitry ny hoe mesianisma ka tsy mijanona amin' ny sehatry ny fivavahana fa amin' ny lafiny pôlitika koa ka midika ho fanantenana fanafahana ara-pôlitika ireo tany na firenena voageja.
1 Mesianisma ao amin' ireo fivavahana abrahamika
1.1 Mesianisma jiosy
1.2 Mesianisma kristiana
1.3 Mesianisma silamo
2 Mesianisma amin'ny fivavahana hafa
2.1 Mesianisma hindo
2.2 Mesianisma bodista
3 Mesianisma sy fanafahana ara-pôlitika
Mesianisma ao amin' ireo fivavahana abrahamikaHanova
Ao amin'ireo fivavahana mônôteista telo lehibe (jodaisma sy kristianisma ary silamo) dia manambara ny lasa sy ny hoavy ny hoe Mesia. Mampahatsiahy ny lasa io anarana io amin'ny fiainan' ny Mesia amin'ny maha mpaminany sy iraka azy. Mampibanjina ny hoavy kosa izy amin'ny fiverenany ety an-tany izay hiady amin'ny mesia sandoka. Ny Kristiana sy ny Silamo ihany anefa no manao an' i Jesoa ho Mesia.
Ao amin' ny Baiboly hebreo dia nohosoran' ny mpaminany Samoela i Saoly (na Saola) sy i Davida.
Ny mesianisma jiosy dia mino ny fiverenan' ny mpaminany Elia (Malakia 4.5) sy ny fiavian' ny Mashiah (hebreo: (מָשִׁיחַ / Mashia'h "voahosotra"). Ny mesianisma jiosy anefa tsy tokony hafangaro amin' ny jodaisma mesianista (izay endrika voalohan' ny jodaisma nanjary kristianisma taloha) sy amin' ny jodaisma mesianika (izay fihetsiketsehana jodeô-kristiana mitory ny filazantsara ka tsy isan'ny jodaisma). Taty aoriana ny mesianisma jiosy dia miandry ny fiavian' ny Mesia izay mety ho olona tokana na maro.
Ny mesianisma dia nandroso dia nandroso tao amin' ny vahoaka jiosy tamin' ny taonjato voalohany, tamin' ny nandidian' ny emperora rômana Titosy ny amin' ny fandravana ny Tempolin' i Jerosalema. Nanohitra ny fahavalo rômana ny mpitondra fivavahana sy ny fihetsiketseham-panoherana mitam-piadiana ka nanambara ny fiavian' ny Mesia izay hifanandrify amin' ny fanafahana an' i Israely, dia hifarana amin' izany ny fahababoana ary hamboarina indray ny Tempoly, avy eo dia hitsangan-ko velona ny maty.
Ny eskatôlôjia kristiana dia mampianatra fa i Jesoa avy any Nazareta no Mesia na Kristy, izay niaina tamin' ny taonjato voalohany, sady mino ny fiaviany indray ety an-tany, izay hialohavan' ny vavolombelona roa, dia i Elia sy i Henoka (Apokalipsy 11.3.). Ny Mesia kristiana, izay antsoiny hoe Kristy (grika: Χριστός / Christós), dia efa tanteraka ao amin' i Jesoa izay inoany fa mpamonjy sy zanak' Andriamanitra.
Ny Miozolmana dia mino fa ny fiavian' i Mahdi fanindroany sy ny fiavian' i Īsā (Jesoa) fanindroany. Ny Silamo dia miantso ny Masiany (arabo: المسيح / Masih), izay tsy izay fa i Jesoa (arabo: عيسى بن مريم / ʿĪsā ibn Maryam "Jesoa zanak' i Maria") ihany. Ao amin' ny Kor'any dia manondro an' i Jesoa ny teny hoe Masih, izay inoana fa "fanomezana" sy "zanaka madio" nambaran' ny anjely Jibrily (Gabriela) niseho tamin' i Mariam (Maria) araka ny sorata 19.19 (Sorata "Maryam"): "Hoy izy: Iraky ny Tomponao hanome anao zanaka madio".
Mesianisma amin'ny fivavahana hafaHanova
Manana ny Mesia atao hoe Kalki ny Hindo.
Ny Bodista manaraka ny firehana theravāda sy mahāyāna dia manana ny karazana Mesia antsoiny hoe Maitreya.
Mesianisma sy fanafahana ara-pôlitikaHanova
Nisy ny fihetsiketsehana mesianika izay mampitovy ny fikendrena mesianika sy ny tanjona ara-pôlitika. Tamin' ny taonjato faha-17 dia nisy, tao amin' ny fanjakan' i Kôngô voazanaky ny Pôrtogaly, ohatra, vehivavy tao amin' ny sarangan' ny olona ambony atao hoe Kimpa Vita na Dona Béatrice izay nampiditra ny fitantarana kristiana tao amin' ny kolontsaina afrikana sady nanambara niaraka tamin' izay ny famerenana amin' ny laoniny an' io fanjakana io sy ny fiavian' ny taranak' olombelona vaovao.
Matetika ny mesianisma dia manohitra ny Fiangonana, rehefa mifangaro ny fivavahana sy ny pôlitika. Hita ao amin'ny Epistily ho an'ny Tesalônisiana izany, izay nanaovan' i Paoly fampitandremana ireo izay manana fanahy "mihetsiketsika" na "tataitra" noho ny faminaniana ny amin' ny fahantomotry ny "Andron' ny Tompo" (na "Andron' i Jehovah"). I Vatikàna koa dia nampitandrina ireo mpiaro ny teôlôjian' ny fanafahana mampitovy ny ady ara-panahy amin' ny adin-tsaranga ka nahatonga ny Fiangonana katôlika nisaraka tamin' ireo firehana mesianika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesianisma&oldid=1001991"
Dernière modification le 4 Martsa 2021, à 13:30
Voaova farany tamin'ny 4 Martsa 2021 amin'ny 13:30 ity pejy ity.